Sawirada rasmiga ah ee la bixiyay ee Oppo Reno Ace ayaa muuqda | Androidsis
Oppo waxay leedahay furitaan dhow oo gacmihiisa ah. Tani waxay ku saabsan tahay Deerada Ace, Taleefan casri ah oo qayb ka noqon doona buugyaraha ay ku qoran tahay ee heerka sare ah 10-ka Oktoobar, taariikhdaas oo maanta ay inaga xigto saddex toddobaad.
Maaha inaynu sugno maalintaas inay timaaddo si aan u ogaanno sida qaabkani u eegi doono muuqaalka kaliya laba nooc oo midabbo ah oo si rasmi ah looga dhigi doono. Waxaa la arkaa in terminaalku uu haayo bilic qurux badan oo ay soosaarayaasha mobilada maanta u isticmaalaan aaladooda, sidaa darteed wax aragti ah kama sameynayso, in kasta oo xaqiiqda ah inaysan xambaarsaneyn akhristaha sawirka faraha.
Oppo Reno Ace waxaa lagu dhajiyay barta Shiinaha ee Jingdong si loo xajiyo intuusan si rasmi ah u gaarin suuqa Shiinaha. Sidaa awgeed, sawiradani waxay u muuqdeen inay si faahfaahsan ugu faahfaahinayaan midabada Elektroacoustic Violet iyo Interstellar Blue.
Bandhigyada OPPO Reno Ace ayaa muujinaya in fooddeeda wuxuu leeyahay shaashad leh heer dhibic biyo ahku. Shaashadda waxaa ku hareereysan jilibyo caato ah. Waxay leedahay iskaanka shaashadda shaashadda. Qeybta kore ee qolofta dambe ee Reno Ace waxay leedahay nidaam kamarad afar geesle ah oo taagan. Badhamada la xakameynayo waxay ku yaalliin cirifka midig ee casriga ah. Tiirka bidix wuxuu leeyahay badhanka awoodda.
Taleefoonka casriga ah ee «OPPO PCLM10» oo dhawaan ay xaqiijisay wakaaladda TENAA ayaa umuuqda inuu yahay casriga xiga ee Reno Ace. Wuxuu culeyskiisu yahay 161 x 75.7 x 8.7mm, culeyskiisuna waa 200 garaam, wuxuuna leeyahay shaashad 6.5-inji ah oo ah AMOLED oo taageerta FullHD + xal ah 2,340 x 1,080 pixels.
Waxaa la sheegay in madal mobile Snapdragon 855 awood taleefanka casriga ah. Saciid SoC ayaa la filayaa in lagu daro 12GB oo RAM ah. Waxay leedahay keyd u dhiganta 256 GB. Telefoonku ma laha booska kaarka microSD.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kuwani waa sawirrada rasmiga ah ee la muujiyey ee Oppo Reno Ace, moobilka xiga ee soo socda